Izintelezi – iAfrika
*Isexwayiso: Okubalulwa ngezansi yilokho abanye babantu basemandulo ababezikhethela khona njengendlela yokuphila. Okuningi kwako sekuguquke futhi sekubhekwa ngamanye amehlo namuhla futhi kwamukeleka ngendlela ehlukile kunaleyo yasemandulo. Konke okwethulwa kule sizindalwazi kudaliwe ngabantu nje futhi akuqinisekisiwe. Isebenzise le mininingwane ngokwazi ukuthi kungase kube khona ubungozi kuyo. Asikho isiqinisekiso sokuthi konke okukhona kule sizindalwazi kuqinisile nokuthi imiphumela yokusetshenziswa … Read more
Ukuphila komuntu akugcini nje ngokuphila kwakhe esaphila ngokwemnyama emhlabeni lapho isahlangane nomphefumulo futhi ebonwa ngabantu aphila nabo. Umuntu ngisho esedlulile emhlabeni inyama isihlukene nomphefumulo usuke esaphila ngokomoya. Nalapho ngisho esedlulile umuntu emhlabeni siyaqhubeka sibe nobudlelwano naye ngoba phela usuke eseyidlozi esibhekile futhi esivikelile thina esisaphila, yingakho ngisho kuthiwa umuntu ube wuhlupho olungakanani esaphila kodwa uma … Read more
Tags Amakhambi, Amashwa, Izintelezi, Ukugeza, Ukugezwa komuntu
Izimbiza, izintelezi nobulawu (Ingxenye yokuqala)